Guddi Soo Baara isku dhicii Shaley ka dhacey Agagaarka Madaxtooyada oo M/weyne Farmaajo uu magacaabey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Guddi Soo Baara isku dhicii Shaley ka dhacey Agagaarka Madaxtooyada oo M/weyne...
Guddi Soo Baara isku dhicii Shaley ka dhacey Agagaarka Madaxtooyada oo M/weyne Farmaajo uu magacaabey.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa sheegay in guddi loo xil-saaray isku-dhacyadii shalay dhexmaray ciidammo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya.
Isku dhacyadii ciidamada dhexmaray waxaa ku geeryooday ku dhawaad shan askari halka afar kalena ay ku dhaawacmeen. Mid kamid ah iska hor imaadyada waxaa uu ka dhacay nawaxiga xaruunta Murtida iyo Madadaalada ee National Threat, waxaana lagu dilay Taliye ku-xigeenkii hore ee Ciidanka Nabad-Sugida Gobolka Banaadir Gaashaanle Ciise Xasan Caraale (Jiijiile).
Madaxwayne Farmaajo ayaa u saaray guddi xaqiiqo raadin ah oo uu madax u yahay Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed Janeraal C/xakiin Daahir Siciid (Saacid).
Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay shirkii Todabaadlaha ahaa ee Golaha Ammaanka Qaranka oo uu guddoominaayey Madaxwaynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale Taliye Saacid oo ay wehelinayaan Wasiirka Amniga Dowladda Faderaalka ah, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Taliyeyaasha Ciidamada Nabad-sugidda iyo Milateriga ayaa isla markiiba soo kormeeray labadii goobood ee ay ka dhacday is-rasaasaynta, iyaga oo halkaas warbixinno kaga dhagaysteen saraakiil ka tirsan ciidamada.
“Guddi ayaa loo saaray oo soo baaraya dadkii ka dambeeyay in shaqaaqadaasi ay dhacdo waxaana laga qaadi doonaa talaabo, tusaale ayeeyna noqon doontaa, ciidan dambe oo loogu dulqaadan doono in shaqaaqo noocaan oo kale ay ka qeyb-qaataana ma jirto”, ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga.
Dhinaca kale Ciidamada Xasilinta ee dowladda Somaliya ayaa gacanta ku dhigay Laba Askari oo ka tirsan Milatariga Somaliya islamarkaana watay dhar shacab.
Dadka Xaafadda Kaawo godey qaybta kala qeybisa degmooyinka Dharkenley iyo Wadajir ayaa sheegaya in ay halkaas ku dagaallameen Ciidamo ka wada tirsan Dowladda Somaliya.
Isku dhaca ayaa ka billowday kaddib markii Labada Askari ee Milatariga ay isku dayeen in ay Qoriga ka qaataan Askariga ka tirsanaa Ciidamada Xasilinta.
Previous articleGuddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka Soomaaliya oo Barlamaanka Federalka Warbixin ka hor jeedin doona.
Next articleNin Sida la sheegey AL-shabaab Qaraxyada u Fududeyn jirey oo Mareykanku Shaaciyey in Soomaaliya lagu qabtey.